२०७३ जेठ २७ बिहिबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी मुख्य उपसहायक विदेशमन्त्री विलियम टोडबीच आज भएको भेटवार्तामा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, संविधान निर्माण र कार्यान्वयन, नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग लगायत विषयमा छलफल भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेका प्रयास र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदा ... बाँकी अंश»
उपराष्ट्रपति शुक्रबार चीन जाँदै
२०७३ जेठ २७ बिहिबार, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन शुक्रबारदेखि चीनको भ्रमण गर्ने भएका छन् । आफ्नो चीन भ्रमणबारे उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आज जानकारी गराए । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारी, आफू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटमा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराएका हुन् । भेटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले उपराष्ट्रपतिलाई चीन भ्रमणका लागि शुभकामना दिनुभएको उपराष्ट्रपतिका प ... बाँकी अंश»
निष्पक्ष न्यायमा त्रिकोणात्मक भुमिका : फुयाँल
२०७३ जेठ २७ बिहिबार, स्याङ्जा । महान्यायधीवक्ता हरि फुयाँलले निष्पक्ष न्यायका लागि त्रिकोणात्मक भुमिकाको सहयोगले मात्रै न्याय सम्भव हुने बताएका छन् । जल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको नवनिर्मित भवनको बिहीवार स्याङ्जामा उदघाटन गर्दे महान्यायधिबक्ता फुयाँलले प्रहरी, अदालत र सरकारी वकिलको निप्पक्ष त्रिकोणात्मक सहयोगले मात्र न्याय सम्भव हुनमा बताएका हुन् । संसदमा हाल १ सय ३८ वटा कानून निर्माण चरणमा रहेको जानकारी गराउदै महान्यायधीबक्ता फुयाँलले पञ्चवर्षिय र ... बाँकी अंश»
२०७३ जेठ २७ बिहिबार, नेपालगन्ज । बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकामा आजदेखि इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि कोहलपुर नपा र आसपासका सात गाविसका नागरिक नागरिकता, राहदानीलगायत प्रशासनिक कामका लागि नेपालगन्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य भएको छ । कोहलपुर क्षेत्रअन्तर्गत महादेवपुरी, चिसापानी, कचनापुर, नौबस्ता, खासकुस्मा, वनकटुवा र शमशेरगन्ज गाविसका करिब दुई लाख मानिस इलाका प्रशास ... बाँकी अंश»
२०७३ जेठ २७ बिहिबार, पोखरा । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माआवादीद्वारा घोषित आजको बन्द सफल पार्न हिँडेका ४२ जना कार्यकर्तालाई कास्की प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बजार बन्द गराउँदै हिँडेका माओवादी कार्यकर्तालाई पोखराको चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल, लेखनाथ नगरपालिकाको तालचोक, गगन गौडालगायतका स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक गणेश बमले जानकारी दिए । उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा अखिल क्रान्तिकारी कास्क ... बाँकी अंश»
२०७३ जेठ २७ बिहिबार, काठमाडौं । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री अग्नि प्रसाद सोपकोटाले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन सरकारले ९० प्रतिशत छुटमा असारभित्र काठ वितरण प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री सापकोटाले भूकम्प पीडितलाई वर्षाबाट जोगाउनका लागि पनि असारभित्र घर बनाउने प्रवन्ध मिलाउन लागिपरेको बताएका हुन् । उनले भने,'वर्षा सुरु भयो, तर भुकम्प पीडित जनताहरु खुल्ला आकाशमा बसिरहेका छन्, उहाँहरुलाई छानोम ... बाँकी अंश»
बाजुरामा बन्दकर्ता पक्राउ
२०७३ जेठ २७ बिहिबार, बाजुरा । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको क्रममा बाजुराबाट २ जना कार्यक्रता प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आन्दोलन गर्दै आएको चन्द समुहका २ जना कार्यक्रतालाइ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले नियन्त्रणमा लिएको हो । उद्योगी व्यापारीहरुको पसलका साथै जिल्ल विकास समिति बाजुराको कार्यालय बन्द गर्ने क्रममा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा जिल्ला सेक्रेटरी भुपेन्द्र ... बाँकी अंश»
बन्दकर्ताद्वारा आगजनी र तोडफोड
२०७३ जेठ २७ बिहिबार, काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले आह्वान गरेको नेपाल बन्दका क्रममा बन्दकर्ताले राजधानीका विभिन्न स्थानमा सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन् । बन्दकर्ताले आज बिहान तीनकुनेमा बा१ज २२०६ नंको ट्याक्सीमा आगजनी गरेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै बन्दमा चलाएको भन्दै बन्दकर्ताले मनमैजुमा माइक्रो बस, त्रिपुरेश्वर र त्रिभुवन विमानस्थलद्वार अघि साझा यातायात, वीर अस्पताल अगाडि ट्याक्सी र कलङ्कीमा रात्रिबसमा ढुङ्गा ... बाँकी अंश»
बस-ट्रकको टक्कर पछि आगो लाग्दा एकको मृत्यु, २६ घाइते
२०७३ जेठ २७ बिहिबार, गोलबजार (सिरहा)। पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको गोलबजारमा आज बिहान यात्रुबाहक बस ट्रकसँग जुधेलगतै आगलागी हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने २६ यात्रु घाइते भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र उपाध्यायका अनुसार ना५ख ८५३८ नम्बरको यात्रुबाहक बस र ना२ख ४२९४ नम्बरको ट्रक जुधेको हो । दुर्घटनामा एक नाम र पहिचान खुल्न नसकेकी एक महिलाको जलेर मृत्यु भएको र बाँकी घाइते यात्रुको उपचार गोलबजारको विभिन ... बाँकी अंश»
२०७३ जेठ २७ बिहिबार, काठमाडौं। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले आह्वान गरेको नेपाल बन्दका कारण आज राजधानीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दका करण सार्वजनिक यातायातका साधन कम चलेका छन् भने निजी सवारीसाधन भने उल्लेखित मात्रामा चलेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीका अनुसार बन्द गराउँदै हिँडेका २१ जनालाई राजधानीका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको छ । तीनकुनेमा एक ट्याक्सीमा बन्दकर्ताले आगजनी गरेको उह ... बाँकी अंश»
नेविसंघ निर्वाचन : संघीय संरचनामा साउनमा गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूको जोड
२०७३ जेठ २६ बुधबार, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघको आउँदो महाधिवेशन संघीय संरचनामा आउँदो साउनमा गर्न अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले जोड दिएका छन् । मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरूभएको नेविसंघ केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले संघीय संरचनामा आधारित रहेर निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका थिए । दोस्रो दिनसम्म आईपुग्दा नेविसंघका ४० जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । आफ्नो धारणा राखेका केन्द्रीय सदस्यहरूले असारमा निर्वाचन गर्नु त् ... बाँकी अंश»
'ढलो-छिटो राजसंस्था व्यूँतन्छ'
२०७३ जेठ २६ बुधबार, पाँचथर। राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले ढिलो छिटो संवैधानिक राजसंस्था व्यूँतिने बताएका छन्। पाँचथरको फिदिममा आज पार्टीको चौँथो जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै लिङ्दनेले जनताले राजसंस्था चाहेकाले व्यूँतिते बताएका हुन्। सडक र सदनमा पार्टीले संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको र जनलहर पनि आउँदै गएकाले बहुमत पुर्‍याएर व्यूँताई छाड्ने ढृडता व्यक्त गरे। राजतन्त्रलाई फालेर ल्याएको लोकतन् ... बाँकी अंश»
नगद सहित पाल्न दिएको गाई, मासुका लागि मारियो
२०७३ जेठ २६ बुधबार, स्याङ्जा। स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिका २ का केशव कोइराला यतीबेला तनावमा छन् । लामो समय गाई पालेर दुधमोही खादै आएको गाई उमेर अवस्थाले पाल्न नसकेपछि पाल्न दिएको गाई मारिएको खवर पाएपछि उनी तनाव बनेका हुन् । गाई हिन्दुहरुले लक्ष्मीको रुपमा मान्दै आएको र देशले राष्ट्रिय जनावरको रुपमा लिने गरेको छ । उमेर अवस्थाले गाई पाल्न नसक्ने भएपछि भिरकोट नगरपालिका १० का ५६ बर्षिय पदमबहादुर विकलाई कोदो सहित ५ सय नगद दिएर गाई पाल्न कोइरालाले दिएका थिए । गाई पाल्न ल ... बाँकी अंश»
ओलीको नेतृत्वमा काँग्रेस सरकारमा जादैन : डा. रिजाल
२०७३ जेठ २६ बुधबार, काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीले ०७४ माघसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहने दाबी गरेका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता ज्ञवालीले भने,‘संविधानको कार्यान्वयन गर्नपनि काँग्रेस लगायत सरकार बाहिर रहेका दलहरु अहिलेकै सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ।’ सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुमतीय सरकारको नेतृत्व नगर्ने स्पष्ट पारिसकेकोले अब सरकार परिवर्तनको च्याप्टर ... बाँकी अंश»
भारतीय सेनामा कार्यरत युवाले सगरमाथा चढेपछि गाविसमा खुशीयाली
२०७३ जेठ २६ बुधबार, काठमाडौं । आफ्नो गाविसका युवाले सगरमाथा आरोहण गरेपछि तनहुँ जिल्लाको गजरकोटे गाविसमा खुशियाली छाएको छ । गाविसबासी युवा मदन रानाले विभिन्न भारतीय सैनिकहरूको नेतृत्व गर्दै सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछि गाविसबासीमा खुशियाली छाएको हो । तनुहँ जिल्लाको विकट गजरकोटे गाविसमा पर्ने डुम्कोट निवासी रानाले गत जेठ सात गते सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए । भारतीय सेनामा कार्यरत उनीसँगै झण्डै डेढ दर्जनको संख्यामा अन्य भारतीय सैनिकहरू पनि सगरमाथा आरोहणमा ... बाँकी अंश»
गुरुङ् विद्यार्थीको राष्ट्रिय महाधिवेसन सम्पन्न
२०७३ जेठ २६ बुधबार, स्याङ्जा । नेपाल तमु(गुरुङ) विद्यार्थी छोंज धीको नवौ राष्ट्रिय महाधिवेसन स्याङ्जाको वालिङमा सम्पन्न भएको छ । तिनदिन सम्म चलेको राष्ट्रिय महाधिवेसनले स्याङ्जाका रिमबहादुर तमुको अध्यक्षतामा ५३ सदस्य केन्द्रिय कार्य समिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको हो । महाधिवेसनले १५ सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद सदस्य समेत चयन गरेको छ । ४२ जिल्लाबाट सहभागी प्रतिनिधिहरुबाट देशभर समेट्ने गरी केन्द्रिय कार्यसमिति चयन गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । सर्वसहमतिबाट चय ... बाँकी अंश»
अविरल बर्षा पछि वीरगन्ज नगरका अधिकांश भाग डुबानमा
२०७३ जेठ २६ बुधबार, पर्सा। आज बिहान परेको पानीले वीरगन्ज नगरका अधिकांश वडा डुबानमा परेका छन् । बिहान ३ देखि ५ बजेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको आदर्शनगर, मुर्ली, पानीट्याङ्की, श्रीपुर, नगवा, भिष्वा, इनर्वा, छपकैया, रानीघाट, गोश्वार लगायतका स्थान डुबानमा परेका हुन् । वीरगन्जको आदर्शनगरमा वर्षाको पानी पसलभित्र प्रवेश गरेकाकारण लाखौँको क्षति भएको व्यापारीले बताएका छन् । आदर्शनगर एरियामा रहेका पसलभित्र पानी पसेपछि भित्र रहेका इलेक्ट्रो ... बाँकी अंश»
२०७३ जेठ २६ बुधबार, काठमाडौ । काठमाडौ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनलाई चुनावी चटारोले छोपेको छ । आगामी जेठ २९ गते शनिबार हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि तीनवटा प्यानल मैदानमा उत्रिएका छन् । कानुन व्यवसायीहरु काठमाडौ बार नेतृत्वमा आ–आफ्ना पक्षका उम्मेदवारलाई जिताउने कसरतमा लागेका छन् । करिब २ हजार ४ सय ४४ मतदाता रहेको काठमाडौ बार चुनावमा नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन (डि.एल.ए नेपाल) काठमाडौबाट अधिवक्ता लक्ष्मण थपलियाको नेतृत्वको समुहले आफ्नो प्यानल घ ... बाँकी अंश»
पर्साको शिक्षा कार्यालयमा करोडौंको अनियमितता
२०७३ जेठ २६ बुधबार, वीरगंज । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेल, शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पंडित र पर्साका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामविनय सिंह समेतको मिलेमतोमा पर्सामा रु पाँच करोड भन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको छ । विभिन्न जिल्लाबाट लगभग ४६ वटा जिल्लान्तर सरुवा र २२ जनालाई प्र.वि., नि.मा.वि. र मा.वि. मा राहत दरबन्दी श्रृजना गरेर मन्त्री र सचिवको आर्शिवादमा करोडौ रुपैया जि.शि.अ. सिंहले असुल गरेका छन् । दुई वर्ष अगाडी अख्तियारले जि.शि.अ. रामविनय सिंहलाई भ्रष्टचार गरेको अभि ... बाँकी अंश»
उद्योगी केडिया अपहरणमा संलग्न नेविसंघका नेता पक्राउ
२०७३ जेठ २५ मंगलबार, कलैया। प्रहरीले उद्योगी सुरेश केडियाको अपहरणमा संलग्न रहेको आरोपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र यादवलाई मङ्गलबार पक्राउ गरेको छ । वीरगन्जका उद्योगी केडियाको यही जेठ १३ गते वरियारपुरबाट वीरगन्ज आउने क्रममा पसाहा पुल नजिकैबाट अज्ञात समूहले अपहरण गरेको थियो । अपहरणकारीलाई सहयोग गरेको भन्दै महागढीमाई नगरपालिका–२ धनसीवा गाउँबाट उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र उप्रेतीले बताउनुभयो । अपरहणमा सं ... बाँकी अंश»